Wasiirka Maaliyadda oo Baxreyn uga qeyb galay Shirka Wasiirada Maaliyadda Jaamacada Carabta | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Wasiirka Maaliyadda oo Baxreyn uga qeyb galay Shirka Wasiirada Maaliyadda Jaamacada Carabta
April 8 (Radio Baidoa
)— Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Aden Ibrahim Farkeeti iyo wafti u hogaaminayo ayaa dalka Baxrayn uga qayb galay shirkii sanadlaha ahaa ee Wasiiradda Maaliyadda ee Jaamacadda Carabta, Shirkan ayaa waxaa soo agaasimay shanta haya’adood ee dhaqaallaha ee hoostagta Jaamacadda Carabta. Waxaana isugu yimaada dhammaan Wasiiradda Maaliyadda & Gudoomiyeyaasha Bangiyada Dhaxe.
Wasiirka Maaliyadda ayaa shirkaan hor dhigay warbixin ka hadlaysa guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya meesha uu marayo, caqabadaha jira iyo sida ugu habboon oo looga bixi karo. Sidoo kale Wasiirka ayaa soo jeediyey talooyin ku wajahan dowrka wadamada Carabta ee ku aaddan sida Soomaaliya u gacan siin lahaayeen dib u soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqo abuurka.
Ugu danbeyntii shirka oo socday mudo labo maalin ah ayaa gaba gabadii kulanka waxaa aad loogu soo dhaweeyey horumarka ay dowladda Soomaaliya ay ka samaysay dhanka maamul wanaaga maaliyadda, iyo isla xisaabtanka, taas oo dhiiri galin karta in dalku helo kaalmooyin wax ku ool ah.